Faalooyinka | warsanradio baydhabo
Faalooyinkawaraki radioWararka DibaddaWARARKA MAANTAWARARKII MAANTA
Warbixin sirdoon oo laga helay gudaha Shiinaha ayaa ka digeysa in Beijing ay wajaheyso mowjad cadaawad ah oo ka dhan ah dilaacista feeyruska Corona, taasi oo horseedi karta isku dhac dhex-maray Shiinaha iyo Maraykanka, xubno wax ka og warbixinta ayaa sidaas u sheegay wakaalada wararka ee Reuters.
Warbixin ay Wasaaradda Amniga Qaranka horraantii Bishii lasoo dhaafay u jeedisay hogaamiyeyaal uu ka mid yahay Madaxweyne Xi Jinping ayaa sheegtay, in dareen caalami ah oo ka dhan ah Shiinaha uu gaaray meeshii ugu sarreeysay tan iyo sanadkii 1989-kii xilligaas oo fagaaraha Tiananmen dad badan lagu laayey, taasi oo Shiinaha ku dirtay caalamka.
Beijing waxay wajaheysaa dareen mowjad ah oo ka dhan Shiinaha, oo uu hogaaminayo Mareykanka, kaasi oo ka dhashay Coronavirsu, wuxuuna Shiinuhu u baahanyahay in uu diyaar garoobo iskudhac hubeysan kisii ugu xumaa oo dhexmara awoodaha dunida, sida ay sheegeen dad wax ka og qoraalka warbixinta, kuwaas oo diiday in aqoonsigooda la shaaciyo, xasaasinimadda arrintaan awgeed.
Warbixinta waxaa diyaariyey Machad Shiinaha laga leeyahay oo lagu magacaabo China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR), waa xarun talo soo jeedin oo raacsan wasaaradda amniga Qaranka oo ah qaybta ugu sarreysa sirdoonka Shiinaha.
“Mahayo akhbaar xiriir la leh warbinxta,” ayaa lagu sheegay war uu xafiiska afhayeenka arrimaha dibadda ugu jawaabay Reuters oo wax ka weydiisay warbixinta.
Machadka warbixinta diyaariyey, waa talo soo jeediye saameyn leh kaasi oo tan iyo 1980-kii ka dhex shaqaynayey Wasaaradda Amniga kalana taliya dowlada Shiinaha siyaasadda amniga iyo arrimaha dibadda.
Xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ayaa si weyn loo arkayay in uu joogo meeshii ugu hooseysay muddo tobanan sano ah, iyadoo ay kasii dareysay is aaminaad la’aanta iyo khilaaf kasoo bilowday eedeynta Mareykanka ee ah ganacsi aan cadaalad aheyn ilaa muranka Hong Kong, Taiwan iyo Badda Koonfureed ee Shiinaha.
Maalmihii lasoo dhaafay, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wajahayay culeys dib u doorashadiisa ah, iyadoo Coronavirus uu tobanaan kun ku dilay dalka Mareykanka, dhaawacweyna u geystay dhaqalaha Mareykanka,
Madaxweyne Trump waxa uu kordhiyey eedeynta uu u jedinayo xukuumadda Beijing, waxaana uu ku hanjabay canshuuro cusub.
Sidoo kale maamulka Madaxweyne Trump waxaa uu tixgelinayaa tallaabooyinka aargoosiga ah ee la xiriira Coronavirus oo ka dhan ah Shiinaha.
Waxaa aad looga rumeysan yahay Beijing in Mareykanku uu doonayo in uu is-hortaago sare u kaca Shiinaha ee aduunka ee lagu rajo weynyahay, dhaqaalihiisuna uu kordhayo.
Warbxintu waxa ay sheegeysaa in Washington ay sare u kaca Shiinaha u aragto khatar amni iyo mid dhaqaale, isla markaana ay caqabad ku tahay Dimoqaraadiyadda reer Galbeedka, ayey sheegeen dadka u waramay Wakaladda Wararka ee Reuters.
Warbixintu waxay intaas ku dartay in Mareykanku uu doonayo in uu xididada u siibayo xisbiga shuuciga ee Shiinaha, isaga oo wiiqaya kalsoonidiisa dadweynaha.
“Saraakiisha Shiinaha ‘masuuliyad gaar ah’ ayaa ka saarneyd inay dadkooda iyo aduunkaba ku war geliyaan khatarta Coronavirus, maadaama ay markii ugu horreysay iyagu ogaadeen,” ayey tiri afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Morgan Ortagus oo ka jawaabaysay su’aal uga timid Reuters.
Iyadoo oo aan si toos ah u abaareyn qiimeynta warbixinta Shiinaha, ayey Ortagus tiri “dadaalada Beijing ay ku aamusineyso seynisyahanadda, weriyeyaasha, muwaadiniinta iyo wargelin la’aanta cudurka ayaa uga dartay khatarta xasaradaha caafimaadka.”
Warbixinta loo sharaxay Reuters ayaa ka digtay in dareen ka dhan ah Shiinaha oo ka dhashay Coronavirus uu shidaal ku dari karo iska caabinta mashuuca maalgashiga Shiinaha ee Belt and Road infrastructure investment, Waashington-na ay kordhiso taageeradda dhaqaale iyo midda militeri ee ay siiso xulifadeeda caalamka, si loo carqaladeeyo amniga Asia.
Mar laga joogo wax ka badan 30-sano, kadib kacdoonkii Tiananmen, Mareykanka iyo dowlado badan oo reer Galbeed ah, ayaa cuno-qabateyn kusoo rogay Shiinaha, waxayna mamnuuceen in hub laga iibsado sidoo kalena teknoolajiyadda lala wadaago.
Shiinuhu waa uu awood badanyahay maalmahaan
Madaxweynaha Shiinaha Xi ayaa horumariyay Istiraatiijiyadda Militeriga, si uu u abuuro awood u qalabeysan inay ku guuleysato dagaalka casriga ah. Waxaa uu balaarinayaa awoodda Shiinaha ee cirka iyo badda si uu u gaaro ciidanka Mareykanka oo 70 sano heystay Asia.
War ay soo saartay Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Shiinaya ayey ku baaqday wadashaqeyn, iyada oo sheegeysa “in quruxda iyo horumarka fadhiya ee xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka” uu u adeegayo danaha labada dal iyo beesha caalamka.
Warku waxaa uu intaas ku daray “erayo kasta ama ficil kasta ee dhaliyana awood sheegasho siyaasadeed, iyada oo lagu gambanayo safmareenka Corona, lagana faa’iideysanayo is-faham waaga labada dal, ma saacideeyso iskaashiga caalamiga ah oo ka dhanka ah feyruskan safmareenka ah.
Mid ka mid ah dadka aqoonta u leh warbixinta ayaa sheegay in warbixinta ay maamuleen bulshada wax garadka ah ee Shiinaha, sida tabtii Shiinaha ee “Telegramkii Novkov”, 1946-dii ayaa waxaa diray safiirkii Midowgii Soofiyeeti u fadhiyay Washington Nikolai Novikov, kaas oo sheegay khatarta dhaqaalaha Mareykanka iyo hamigiisa militeri ee dagaalkii labaad ee dunida.
Fariimtii Novikov waxay jawaab u aheyd Telegram kii uu George Nennan kasoo diray Moscow oo uu ku sheegay in Midowga Soofyeeti aysan suurta gal ka ahayn in uu reer Galbeedka Nabad kula degenaado, isla markaana ay tahay in la iska dhiciyo, oo loo is ticmaalo Istiraatiijiyadda ugu fiican.
Labada fariimoodba waxay caawiyeen in agu tilmaamo dagaalkii qaboobaa.
Mareykanku waxa uu Shiinaha ku eedeeyay in uu xadiday akhbaartii ugu horreeysay ee Viruska, kaas oo markii hore laga ogaaday bartamaha magaaladda Wuhan, ayna yareysay khatartiisa.
Beijing ayaa inkirtay inay dabooshay jiritaanka iyo faafista xanuunka Coronavirus.
Shiinuhu waxaa uu maareeyey in uu xakameeyo faafista Birus ka ee dalkiisa waxaana uu isku dayayaa in uu door hogaamineed ka qaato dagaalka uu aduunku kula jiro COVID-19.
Laakiin Shiinuhu waxaa uu wajahayaan jawaab isisoo tareysa oo kasoo bilaabaneysa cambaareyn iyo in Beijing lagula xisaabtamo doorkii ay faafinta cudurka ku lahayd.
Trump ayaa sheegay in uu jari doono maalgelintii Hey’adda Caafimaadka Aduunka, taas oo uu ku eedeeyay inay Shiinaha u xaglineeyso, waana arrin ay diiday xukuumadda Beijing.
Dowladda Australia ayaa ku baaqday baaritaan caalami ah in lagu sameeyo meeshii uu kasoo askumay feyruskan Corona iyo sida uu ku faafay.
Bishii lasoo dhaafay, Faransiiska ayaa u yeertay safiirkii Shiinaha u fadhiyay Paris, si ay uga cabato qoraal safaaradda websitekeeda lagu daabacay oo lagu cambaareeyay, sida reer Galbeedku xanuunka ula tacaalayaan.
Virusku waxa uu ku dhacay ilaa hadda 3 million oo qof aduunka oo dhan, waxaana uu sababay inay u dhintaan dad ka badan 200,000 qof, sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters.
Xog sirdoon soo shaacisay qorshe dagaal horseedi kara oo loo degay Shiinaha was last modified: May 8th, 2020 by Admin
written by Siid Cali
Baydhabo(WRB)Inkastoo Ay Isu Soo Tareyeen Musharxiinta Utaagan Xilka Kursiga Xildhibaanka Qaran Ee Doorooshooyinka Dadban Ee Sanadkaan 2016 waxaa manta isu soo sharaxey gudoomiyaha gobolka bay rashiid cabdulaahi maxamed isagoo mushrxinamadiiisa ku soo bandhigey xaflad manta kadhacdey wagara gest house.
Xafladan waxaa kasoo qeyb galey Malaaqyo”Sama Doono”Urarada Dhalanyarada”Haweenka”Xildhibaano Katirsan Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Somaliya Iyo Xubno Katirsan Maamulka Gobloka Iyo Kan Degmada.
Sheeq Biyaadir oo kamid ahaa dadkii kahadley xaflada ayaa amaaney waxqabadkii sanadki iyo barka ahaa ee uu jirey maamulka uu hormuudka ka ahaa rashiid cabdulaahi maxamed kaaso lagu soo bandhigey meesha xaflada ay ka dhaceysey filim dukumeentiri ah oo uu gudoomiyaha kaga shekeyey wixii uu soo qabtey sheeq biyaadir hadaladiisa waxaa ka mid ahaa.
Gudoomiyaha degmada baydhabo ahan duqa magalada Cabdulaahi cali maxamed watiin oo kamid ahaa masuulinta lagu casuumey xaflada ayaa qodbad xamaasad leh uu kajeediyey xaflada waxaa uu laga faaloodey qibradiisa iyo aqoonta uu uleeyahay xilgudashada iyo hogaaminta umadeed ee mudane rashiid cabdulaahi maxamed taasoo gudoomiye cabdulaahi cali maxamed watiin kaga codsadey bulshadii halkaasi kasoo qeyb gashey iney ku doortaan musharax rashiid cabdulaahi maxamed.
Sidoo kale haduu uu guleysto inuu tabi doono garab iyo gacal walaal ahaa oo midigtiisa bineeyey.
Geba gabadii waxaa lagaarey waqtigii gudoomiye rashiid uu shaacin lahaa musharxinamadiisa waxaana looga kala dhaxbaxey musharax rashiid cabdulaahi maxamed bulshadiisa iyo mogroofanka wuxuuna yiri”
W/Q/Wariye:Muqtaar Sheeq Aadan(Dalmar)
Dhageyso+Warbixin+Daawo Sawiro:G/gobolka Baay Ayaa Shaaciyey inuu Yahay Musharax Xildhibaan Qaran was last modified: October 22nd, 2016 by Siid Cali
ARIMAHA BULSHADABANDHIGA AQOONTAFaalooyinkaWARARKII MAANTA
Baydhabo(WRB)Waa sheeko ka hadlaysa wiil in badan waano iyo wacdi wax ku qaadan waayay, kadib mar danbe ogaaday in markii la waaninayay u ekayd in uu wax ku qaato,laakiin caqli xumo iyo garaad yari uu la jaal ahaa seejisay wixii fursad ahaa ee xiligaa haddii uu wax ku qaadan lahaa , manta uusan urugo iyo ciil dib ugu gocdeen wixii uu isaga is yeelay ee manta uu ogaady waqti xeero fandhaal kala dhaceen.
Cali, “asalaama calaykum, Aadan?”
Aadan “wacalaykuma salaam, Cali?”
“Aadanoow walaal waad murugsantahay,wajigaaga waxaa iiga muuqda murugo iyo tiiraanyo,ee maxaa ku helay ee aad la murugoonaysaa ,wax ii sheeg haddii ay suurtagal tahay in aan wax kaala qabto ,kolay talo ahaataba?”
Aadan “iga daa walaal caliyoow, murugtayda ma ahan mid haddii aan kuu sheego iminka aad wax igala qaban karto , aniga in ay igu kali ahaato wax dhaama malaha, ee waxba ha’is shiddaynin ee orodoo is ka bax .?”
Cali “heedhe Aadanoow sided iila hadlaysaa ma anigaad manta wax iga qarsanaysaa, oo arin adiga ku murjinaysa I leedahay aniga haygu kali ahhato.
Sideey wax kaa yihiin ,miyeynaan labadeena ahayn saaxiibo dhib iyo dheef wadaagaa,oo wixii midkeen ku soo kordha isu sheega dabadeedna wada xaliya.?”
Aadan “Caliyoow sidaas maaha qaabkaad u fahamtay hadalkayga, ruuxna ma mooga in aan nahay saaxiibo isku dhaarta oo nafta ay u dhaxayso. Balse aan kuugu celiyee hadalkayga , arintan I murjinaysa ma’ahan mid aad adiga wax igala qaban karto waayo waa mid igu kali ah oo aad adigaba qayb ka ahayd dadkii igu waaninanayay in aan daayo inta aysan ila tagin xili aan waxba laga qaban Karin oo ay talo fara ka bixin.?”
Cali “Aadanoow,hadalka ha’ii dulmarine si toos ah diirka uga qaad. “ileen waa tii la yiriye.” “run iyo ilkaba waa la caddeeyaa.”
Aadan “arintan I murjisay in aad ogaato ayay kaaga dhegtay si aad aad wax iigala qabato, anna waxay iiga dhegtay in ay igu kali ahaato si aanad ugalin mushkilad kugu keenta murugadayda oo kale, ee Caliyoow ila daa tayda si aan kaligeey ugu gudbo iyadoo cidna waano iyo talo igu siin xalka arintan I murjisay.”
Cali “Aadanoow soomaalidu waxay tiraahdaa.” “war le helaaba talo la hel” ee adoo taan maanka galinaya armay roontahay in aad ila wadaagto arinkan si aan ugu yaraan fikrad ama tallo kuu siiyo, ileen talo adaa ku nool ee iyada kuguma noola ayaa la yiriye.”
Aadan “Caliyoow walaal waxaad ma moogtahay “tiiraanyo cudur iyo nimey towsi haysaa ileen taah ma daayo” anna arinkaygu waa “I taageer Allahayoow arintayda kala taal adaa toosin karaya”. Ee sidaas haynoo ahaato, nabadeey.”
Cali : “waayahay. Aniga waan kuu daayay taada ee ann aragno halkeey ku gayso waxaad kaligaa isku koobtay iyo arinkaad xalkiisa kaligaa go’aansatay in aad hesho.
Cali “wallee waa yaab, waxaa horay loo yiri “waxaad qarsato wey ku qarsadaan” saaxiibkeey Aadan arinkan uu iga qarsanayo ee uu diiday in uu ii sheego walee maalin buu ii sheegi doonaa, waase goor danbe ee aan aniga waxba ka qabankarin, bal aan arko halka uu dhaanka ku furo .”
Aadan wuxuu saaxiibkiis ka qarinayay qaan la go’day kadib markii uu bartay balwadda gaar ahaa Jaad iyo Sigaar taasoo saaxiibkiis uusan ku ogayn intii ay wada dhiganayeen dugsiga sare . cali iyo aadan waxay is moogaayeen muddo toban sano ah. Cali wuxuu jiray dalka dibadiisa ee uu waxbarasho lacag la’aan ah ka helay markii iskuulkii ay wad dhiganayee isaga iyo saaxiibkiis uu ka galay kaalinta koowaad. Waxay kuwada xiriiri jireen muddadii ay kala maqnaayeen khadka teleefoonka iyo baraha bulshada oo aan lagu ogaan Karin waxa ku soo kordhay qofka inta ay kala maqanyihiin. Balse waxaa dhici jirtay in cali mararka qaar uu soo Waco saaxiibkiisa in uu ka maqanyahay xaafadda in ay u sheegi jirtay Aadan walaashiis. Taasi waxay cali ku beertay shaki ah in saaxiibkiis aadan uu bartay balwad . cali isagoo shakigaa qaba ayuu dhowr jeer saxiibkiis ka waaniyay in uu san u talaabin isakana jiri khatarta balwadda si aysan ugu dhicin mustaqbal xumo iyo dib u dhac nololeed.
Waa sidii uu filayaye waa danbe oo cali lagala wareegay aqalkii ay reekiisu deganaayeen ayaa isagoo mudloosan oo luudaya wadada isaga hor yimaaden saaxiibkiis cali oo u sii socda jaamacad uu bare ka ahaa. Indhaha isagoo raba aragtidii hore in ka dadbado ayaa cali saan ku boobay saaxiibkiis Aadan .
Cali “war saaxiibkeey Aadan ahaa, ii waran ma nabad qabtaa hooyo iyo reeka kawaran”.
Aadan “Caliyoow adduun labaa dulaysay.” “wax kugu soo socdo oo aan laguu sheegayn, iyo wax ku soo dhaafay oo aan dib laguugu celinayn”. Aniguna tabtii ayaan ahay ee saaxiib wakaa warkayga. Reerna war uma hayo. Wakaa halkay duni I dhigtay.”
Cali “Aadanoow maxaad I tiri reer war uma hayo, ismoogeen maxaa reeka adiga idinkala dhantaalay oo aad u kala irdhoowdeen. Bal ii waran adoo si fiican warka iigu sheegaya”.
Aadan “wagii isugu kayn dambaysay soo ma ogayn in ay I haysay murugo, markii aad I weydisay aan kugu iri ,waa arin ii gaar eh ee haygu kali ahaato”.
Aadan “Caliyoow gadaashaa waxaan bartay balwad , sidii aan ugu qayilayay amah wey ila go’day waxaana laygu yeeshay dayn badan oo aan bixin waayay. Markii danbe waxaan iibiyay gurigii ay reerku deganaayeen , waxaan soo fariisiyay reekii meel maran anigana sidaas ayaan deyro kaga noqday reekii ,wad aragtaa manta in aan kaligeey cilodladaa sheekaysanaya oo hadba mar goconayo waano iyo talo wixii walaal isiin jirayy ,ee aniga dheg jalaq u siin waayay ,ee waad aragtaa tan iga raacday”.
Cali “Aadanoow,” “Adaa isyeelay ,shalay hadaad ii sheegi lahayd talo ayaan ku siin lahaa maantase waa meel maran far ku taag. Jaw saaxiib. “ADIGAA IS YEELAY”.
W/Q/Wariye:Muqtaar Sheekh Aadan (Dalmar)
Aqriso:Sheekada Adigaa Is yeeley was last modified: October 9th, 2016 by Siid Cali
Baydhabo(WRB)Taliyaha Hogaanka Iyo Jinsiyadaha Dowlada Koonfur Galbeed Soomaaliya Ayaa Maanta Magacaabey Madax Airporka Magaalada Baydhabo Cumar Hagi Oo Ahaa Madaxa Imagareeshanka degmada baydhabo ayaana Loo Magacaabey Halkaan Hoose Ka Aqriso.
Aqriso:Madaxii hore ee Qaybta Baasaboorada oo hada loo magacaabey qaybta Airportka was last modified: October 9th, 2016 by Siid Cali
ARIMAHA BULSHADABANDHIGA AQOONTAFaalooyinkamaqal iyo muqaalWARARKII MAANTA
DHAGEYSO+DAAWA SAWIRO:Ardey maanta Ka Qalan jabisey Jaamacada Koonfurta Soomaaliya
Baydhabo(WRB)Wasiiro ka tirsan xukuumada soomaaliya,siyaasiyiin xorey xilal kala duwan uga soo qabtey xukuumadihii KMG ahaa ee dalka soo marey,Agaasimayaal,Madaxda waxbarashada,waalidiin iyo ardey ayaa kasoo qeyb galey munaasabad loo qabtey 93 ardey oo ka qalab jabiyey jaamacada koonfurta oo kutaala magaalada baydhabo ee gobalka bay.
Madaxa jaamacada koonfurta soomaaliya maxamed cali kalaay ayaa marka hore goobta ka sheegay muhiimada munaasabada.
Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta injineer saalax sheikh cusmaan,wasiirkii hore ee gaashandhiga xukuumadii KMG aheyd cxakiin maxamuud fiqi ayaa u hambaliyey aradada qalan jabisey,waxaana ay ku dheeraden ka hadalka muhiimada wax barashada ay u leedahay dhalinyarada.
DHAGEYSO+DAAWA SAWIRO:Ardey maanta Ka Qalan jabisey Jaamacada Koonfurta Soomaaliya was last modified: September 24th, 2016 by Siid Cali
Baydhabo(WRB)Yuusuf Xasan Mursal oo ka mid ah Aqoonyahanada Degaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta ololihiisa musharaxnimo ku soo bandhigay magaalada Baydhabo Ee Xarunta Gobolka Bay.
Ka dib markii maanta Mushax Yuusuf Xasan Mursal oo u taaagan in loo doorto mudanayaasha Baarlamaanka federaalka Ee 2016 ayaa munaasabad lagu shaacinaayey laguna wargelinaayey dadweynaha ku nool deegaanka musharaxa uu ka soojeedo lagu qabtay Hoteelka Wegera Magaalada Baydhabo.
Munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay odoyaaldhaqameedyo,Xildhibaaano,Aqoonyahano,siyaasiyiin,culmaa’udiin,waxgarad,Haweeen, iyo dhalinyaro .
Munaasabada ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Mushax Yuusuf Xasan Mursal oo qudbad dheer oo uga hadlaayey taariikh nolooleedkiisa iyo waxa uu qabandoono marka loo doorto Xubin Ka Tirsan Baarlamanka Federaalka Ee Soomaaliya oo sheeegay baahiyo badan oo xiligan bulshadu u baahan yihiin.
Intaa ka dib mas’uuliyiintii iyo waxgaradkii ka soo qaybgalay munaasabada ayaa soo dhaweeyey qodobadii musharaxa kahadlay iyo codsigiisa oo ah in loo doorto Baarlamaanka federalka 2016-2020 iyagoona ka dhawaajiyey in dalku uu u baahan yahay isbedel siyaasadeed oo aqoon ku dhisan tahay.
Ugu Dambeyntii, Mushax Yuusuf Xasan Mursal ayaa waxaa uu mudo ka soo shaqeeyey saxaafada Gaar ahaan cidaacada BBC-da hada oo uu ka shaqeynaayey Ha’adda ICRC wuxuu haatan noqday qof u ruqaansaday dhan siyaasada Dalka.
YUSUF XASAN MURSAL OO SHAACIYAY INUU YAHAY MUSHARAX U TAAGAN XILDHIBAANIMADA BFS EE 2016 was last modified: September 16th, 2016 by Siid Cali
Howlgal qorsheeysan oo ay wadajir u fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM ayaa lagu dilay horjoogihii maleeshiyada Alshabaab ee dagmada Aa-dheegle ee gobalka Shabeellaha Hoose.
Howlgalka oo dhacay habeennimadii Arbaco aheyd ayaa ciidamada weerar qorsheysan ka fuliyeen degmada Aaw-dheegle Maxamed Xasan, iyagoo sidoo kale soo furtay hub iyo saad ciidan oo ay lahaayeen kooxda Al-shabaab.
Afhayeenka Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, Jeo Kibet oo la hadlay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa xaqiijayay in howlgalkaasi oo xalay dhacay lagu dilay horjoogihii Kooxda al shabaab Maxamed Xasan, sidoo kalana Ciidamadu ay gacanta ku dhigeen hub ay lahaayeen maleeshiyaadka Al-shabaab.
Col Kibet, oo SONNA ay wax ka weydiisay khasaaraha soo gaaray ciidamada wadajirka ah ee howlgalka fulay ayaa ka gaabsaday in uu bixiyo faahfaahin intaas ka badan, balse hoosta ka xarriiqay in howlgalkaasi uu dhamaaday sidii loogu talagay.
Degmada Aaw-dheegle ee gobalka Shabeellaha hoose ayaa qiyaastii 75Km dhinaca galeed ka xigta magaalada Muqdisho, waana deegaan caan ku ah dhinaca wax soo saarka tacbashada beeraha.
Horjooge Al-shabaab ah oo Aw-dheegle lagu diley was last modified: September 16th, 2016 by Siid Cali
Wakiilka urur gobaleedka IGAD ee arrimaha Soomaaliya danjire Maxamed Cabdi Afey, oo manta shir jaraa’id ku qabtay magalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa sheegay in shirka madaxda dalalka IGAD ugu soo gabagaboobay magalada Muqdisho uu ahaa mid tariikhi ah, isla markaana muujinayay hormar wanaagsan ee Soomaaliya ay ka sameysay dhinacyada Siyaasadda iyo Amniga.
Danjire Afeey, ayaa dowladda Soomaaliya, ciidamada ammaanka iyo shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay hirgalinta iyo sida nabadgalyada ah ee Muqdisho uu ugu qabsoomay shirkii madaxda dalalka IGAD.
Dhanka kale, safirka Soomaaliya uu fadhiya dalkani Kenya Mudane Jamaal Maxamed Xasan, ayaa sheegay inuu shirka uu caddeyn u ahaa in Soomaaliya ay martigalin karto shirar heer caalami ah, maadaama uu soo hagaagay ammaanka dalka Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa marti galisay shir madaxeedkii 28aad ee IGAD, kaas oo ay ka soo qeeybgaleen Madaxweyneyaasha Kenya, Uganda, Ra’iisul Wasaaradaha dalka Itoobiya, iyo Wasiirada arimaha dibadda dalalka IGAD qaarkood.
Daawo Sawiro:IGAD oo amaantay dowladda Soomaaliya was last modified: September 16th, 2016 by Siid Cali
ARIMAHA BULSHADAFaalooyinkawaraki radioWARARKII MAANTA
Kumannaan qoys oo ay saameysay abaar ka jirta gobollada Baay iyo Bakool ayaa labadii bilood ee u dambeysay ku soo barakacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Qoysaskan oo u badan beeraley waxaa ka dhammaaday keydkii uga haray dalagyadii ay horay u goosteen, iyadoo roob-yari gobolladan ka taagneyd labadii sano ee la soo dhaafay ay hoos u dhigtay wax-soo-saarkii beeraha.
Guddoomiyaha arrimaha samafalka ee maamulka gobolka Baay, Cumar Maxamed Cali ayaa Warsanradio u sheegay inay diiwaangeliyeen in ka badan 4,000 oo qoys oo ay abaarta ka soo barakicisay Diinsoor, Qansaxdheere, Ufurow iyo tuulooyinka hoostaga ee gobolka Baay iyo deegaanno kale oo dhinaca Bakool ah. Wuxuu xusay in dadkan markii ay magaalada yimaadeen ay intooda badan ku biireen xeryo ay horay u deggenaayeen dad soo barakacay, qaarka kalena ay dulsaar ku noqdeen eheladooda.
Nuuney Macallin Isxaaq oo wadata afar carruur ah waxay ka mid tahay 50 qoys oo ku biiray xerada lagu barakacay ee 11-ka Jannaayo. Waxay abaartu ka soo barakicisay degmada Diinsoor oo 120 km u jirta Baydhabo, iyadoo xerada timid 10-kii bishan Sebtembar. Nuuney ayaa Warsanradio u sheegtay inay soo lugeeyeen 90 km, waxayna soo socdeen muddo shan maalin ah. Markii ay yimadeen deegaanka Goofgaduud oo 30 km u jirta Baydhabo ayay bajaaj ku soo raaceen lacag $30 ah oo ay telefoonka ugu direen dad ehelkeeda ah oo jooga Baydhabo.
Nuuney ayaa xustay in muddo sanad ah aanu wax dalag ah uga soo go’in beer ay lahaayeen oo ay ku tiirsaneyd nolosha qoyska. Beerta oo 10 hiktar ahayd intii aysan qallalin waxay ku abuuran jireen digir, galley iyo masaggo. “Baahi iyo harraad daran ayaan muddo u adkeysaneysay. Markii dambe waxaan go’aansannay inaan halkan nolol ka soo raadinno, welina cid na caawisa ma helin,” ayay tiri.
Dadka soo barakacay waxaa xeryaha qaar looga hirgeliyay iskuullo, waxaana loo dhisay musqulo iyo aqallo jiingado ah, laakiin gargaar cunto ah ma helaan oo inta badan waa dad noloshooda ka dabbara shaqooyin yaryar oo ay magaalada ka qabtaan.
Xaawo Cabdi Cali oo ka mid ah beeraleyda soo barakacday ayaa Warsanradio u sheegtay in ay maalintii toddobaad ku hoyaneyso xero lagu barakacay, isla markaana aysan haysan wax ay cunaan, iyada iyo labadeeda carruurta ah ayay xustay inay habeenkii seexdaan meel bannaan oo dhaxan iyo qabow leh. “Carruurta way ku qandhadeen meeshan bannaan ee aan seexiyo,” ayay tiri. Sababta ugu weyn ee ay magaalada u yimaadeen ayay ku tilmaantay inay tahay meel ay ka heli karaan fursado shaqo ama ciddii caawineysa ay ugu imaan karto.
Xaawo ayaa sheegtay in xaaladdooda ay sii xumaatay markii roobkii gu’ga uu si wanaagsan uga di’i waayay deegaankooda bilihii Abriil ilaa Luulyo, markaas oo ay rajeynayeen inay dalag ku abuurtaan beertooda oo ku bixi jirtay biyaha roobka.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Aadan Cali Aadan ayaa Warsanradio u sheegay in ay qorsheynayaan inay hay’adaha samafalka u bandhigaan xaaladda dadkan, maaddaama ay baahida dadkan ka badan tahay mid uu maamulkoodu wax ka qaban karo
W/Q/Wariye:Muxidiin Xasan Maxamed(Xusni)
XERYAHA BAYDHABO OO AY KU BIIREEN KUMANNAAN QOYS OO AY SOO BARAKICISAY ABAARTA BAAY IYO BAKOOL was last modified: September 14th, 2016 by Siid Cali